Ya mere na ị nwetara a jụụ AVI video clip na ị chọrọ ime ka n'okporo ụzọ na site na gị i-ngwaọrụ, ma ebe ọ bụ na ọ bụghị zụrụ ke iTunes ụlọ ahịa, ịlụ ya dị n'ime gị iTunes n'ọbá akwụkwọ nwere ike ịbụ otu obere tricky. Na kwa iTunes naanị akwado video na MOV, MP4, na M4V. Iji nyere gị aka ọma mbubata AVI ka iTunes, i kwesịrị iji tọghata AVI ka iTunes dakọtara formats.
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional AVI ka iTunes Ntụgharị
Part 2: Free AVI ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online AVI ka iTunes Ntụgharị
Nke a video Ntụgharị bụghị nanị oké video converting ngwá ọrụ, ma na-enyekwa ụfọdụ jụụ video edezi ọrụ dị ka merging, ọnwụ, cropping wdg Ọ bụrụ na gị AVI obere vidiyo nwere ọtụtụ footages, ị nwere ike isonyere ha n'ime a zuru ezu video ozugbo na ngwa a. Ọ nwere ma Mac na Windows nsụgharị. Download na wụnye nri version na kọmputa gị mbụ. Na mgbe ahụ na-eso nduzi ịrụ video akakabarede.
Professional iTunes Ntụgharị: Ọ na-akwado 150+ video formats, gụnyere AVI, MKV, MP4, MOV na ndị ọzọ.
Elu àgwà video mmepụta: Ọ na-akwado lossless video akakabarede, na-eme ị ga-esi a elu mmepụta faịlụ enweghị adịkwa mbụ video mma.
Fast video Ntụgharị: The 30X kasị video akakabarede ọsọ-eme ka ọ karịrị echiche ndị ọzọ na asọmpi.
Great video nchịkọta akụkọ: Dezie gị AVI faịlụ site trimming, croppng, na-agbakwunye mmetụta ma ọ bụ watermark.
Ike video ka DVD burner: Ọ asakde video ka DVD na otutu menu ndebiri.
Olee otú iji tọghata AVI ka iTunes
1. Tinye AVI faịlụ ka AVI ka iTunes Ntụgharị
Ị nwere atọ ịnara ụzọ mbubata gị Obodo AVI faịlụ a usoro. Ọ bụrụ na gị AVI faịlụ ndị na aka, dị nnọọ kpọmkwem ịdọrọ ha ka ha ngwa a. Ma ọ bụ i nwere ike see menu ma ọ bụ pịa "Tinye Files" button na nke a ngwa si ​​ebi ndụ mbubata gị AVI faịlụ site na kọmputa na-ngwa a. Rịba ama na a na ngwa na-akwado ogbe akakabarede, otú i nwere ike tinye ọtụtụ na oge.
Mgbe ahụ, ndị niile dị AVI videos na-depụtara na ekpe item trey nke ngwa a. Ka ihichapụ video, ị pụrụ ịkpali òké n'elu video ọrụ mmanya na-egosi na nso button wee pịa ya.
2. Họrọ otu iTunes akwado usoro dị ka mmepụta format
Dị nnọọ see "mmepụta Format" bọtịnụ na n'akụkụ aka nri nke interface, na mgbe ahụ na-aga "Apple" udi. Ebe a, ị nwere ike họrọ gị chọrọ ngwaọrụ nlereanya dị ka mmepụta usoro. Rịba ama na niile kachasị tupu ntọala ebe a bụ kpam kpam dakọtara na iTunes.
3. Dezie AVI videos (Nhọrọ)
Ọ bụrụ na ị chọrọ akuku, ịkpụ, kewaa, bugharia, jikota AVI videos, ị nwere ike iji nke a ngwa edezi ọrụ na-eme ụfọdụ edezi ọrụ, gụnyere agbakwunye jụụ video mmetụta na ndepụta okwu wdg Iji mee ya, na-aga "Dezie" button ịhọrọ ihe ị chọrọ ka "ewepụtụ", "Video Dezie" na "jikota n'ime on File" wdg
4. tọghata AVI ka iTunes
Na ala-nri akuku nke a ngwa si interface, pịa "tọghata" button na-amalite converting AVI na iTunes enyi na enyi usoro. Otu mgbe, ị ga-ahụ ọganihu mmanya. Akakabarede ọsọ tumadi na-adabere na gị na kọmputa 'arụmọrụ na size gị AVI faịlụ.
Mgbe video akakabarede okokụre, ị nwere ike mbubata mmepụta faịlụ ka iTunes. Na-agba ọsọ iTunes, pịa "File" menu, ahọrọ "Tinye faịlụ ka Library" nhọrọ ịnyagharịa mmepụta nchekwa mbubata converted faịlụ.
Video Tutorial: Olee otú Jiri AVI ka iTunes Ntụgharị
# 1. Free AVI ka iTunes Ntụgharị Wondershare Video Converter Free
Ihe mere ndidọ a na ngwa bụ n'ihi na nke ya egosipụta ọtụtụ ihe. Ọ na-ahapụ gị tọghata videos, dezie videos na ọbụna donwload online videos. Ọzọkwa o nwere nnọọ mfe iji usoro. Dị nnọọ ịdọrọ gị faịlụ a free AVI ka iTunes Ntụgharị ans ịtọ gị video mmepụta format, na mgbe ahụ na-amalite iji tọghata.
Pro: 100% free, mfe iji
1. The free version adịghị nwere presets ka dị ka mmepụta formats. The Pro version nke ngwa nwere nke a mma.
2. Mmepụta video àgwà na-arụ ọrụ ọsọ-apụghị jiri ya tụnyere Video Converter Ultimate.
3. Ị nwere ike iji na DVD ọkụ ọrụ. Ọ idu ke Pro version nke software.
Olee otú Play WMV na iTunes
Apụghị Tinye MP4 / MPEG ka iTunes? Edozi.
iDVD Ike Ọkụ MOV? Nweta Ngwọta Lee
YouTube Downloader maka Windows 8: Download YouTube Video na Windows 8
2 Easy Ụzọ iji tọghata Dailymotion ka MP3
Olee otú SPLIT / Kpaa / Cut M4V Files
MTS Ntụgharị - Olee otú iji tọghata MTS ka fọrọ nke nta ọ bụla Format na Mac / Windows
> Resource> tọghata> AVI ka iTunes Ntụgharị: Olee mbubata AVI ka iTunes Library